IZum Eisenkini (Beratzhausen), igumbi elinegumbi elinye eli-25m² emaphandleni elineWiFi yasimahla. - I-Airbnb
IZum Eisenkini (Beratzhausen), igumbi elinegumbi elinye eli-25m² emaphandleni elineWiFi yasimahla.
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguAnna-Lena
Indlu enegumbi elinye 25m² emaphandleni eneWiFi yasimahla
Indawo enegumbi elinye 25m² kumgangatho wokuqala kwindawo ezolileyo. Igumbi lokuhlala lineebhedi ezimbini ezingatshatanga (kubandakanywa nelinen yebhedi), umkhusane wabucala okhoyo. Ikhitshi lisebenza ngokusebenza nge-oveni, isitovu, umatshini wokucoca ikofu kunye nefriji. Indawo yokuhlala phantsi kwesibhakabhaka esibanzi simema ukuba uphumle. Akukho TV, kodwa iWiFi yasimahla ibandakanyiwe kwixabiso. Igumbi lokuhlambela lineshawa, indlu yangasese kunye nesinki. Iitawuli zikhona. Igadi iyafikeleleka nakwiindwendwe. Nceda uqaphele ukuba ifulethi alinayo indawo yokungena eyahlukileyo, kodwa kungenwa ngepaseji kunye nezinyuko ezikwindlu yomnini-mhlaba.
Ukupaka okanye ukwabelana ngegaraji kunikezelwe.
Ibhedi yomntwana inokwenzeka ngesicelo. Akukho zilwanyana zasekhaya.
Ukusuka apha ungafumana intlambo yasendle kunye neyothando yeSchwarzen Laber-ifikeleleka ngokulula ngeenyawo. Yonwabele ukuthula okanye uzame isandla sakho ekukhweleni amatye.
Ukudibanisa - funda iziseko zesinyithi kunye nento
Uqhagamshelo lweBroadband yeWiFi luyafumaneka.
Kukho iivenkile eBeratzhausen, malunga neekhilomitha ezi-5, okanye eParsberg, malunga ne-6.5 km ukusuka apho. Ndiyabulela uxhulumaniso lweDB ngaphandle, uhambo oluya eRegensburg (imizuzu engama-30), iNuremberg (imizuzu engama-50) kunye neMunich (imizuzu engama-90) inokwenzeka.